ARIMAHA BULSHADA Archives - Page 13 of 13 - Guuguule News Network
Hargeysa(Guuguule)_Si aad u daawato muuqaalkan waxaad u baahantahay barnaamijyadii ugu dambeeyay Chrome, Opera, Firefox ama Internet Explorer in kumbuyuutarka aad ku shubtid. Haddii aad taleefoonka ka daawanaysid – waxaad u baahantahay barnaamijyadii ugu dambeeyay ee YouTube app / Android / iOS. Radhika iyo Yashoda ayaa maalin kasta iskuulkooda u gala safar qaadanaya lix saacadood. Waxa ay ku noolyihiin tuulo ku ...
Wajaale(Guuguule)_Madaxweyna somaliland axmed siilaanyo ayaa shalay xadhiga ka jaray biyo gelin loo sameeyay magaalada tog-wajaale , taasoo noqoneysa markii ugu horeysay ee wajaale hesho biyo nadiif ah oo qasabad ah. Wajaale oo ay ku noolyihiin qiyaastii 35 kun oo qof waxaa biyaha looga soo qaaday ceelal riigag ah oo laga qoday deeganka BOTOR oo 24km u jira dhanka woqooyi wajaale ...